Dzidza kumisikidza yako nyowani Apple Tarisa kune zvaunofarira | Ndinobva mac
Dzidza maitiro ekugadzirisa yako nyowani Apple Watch kune yako yaunofarira
Kana ivo Magi vakakupa iyo Apple Watch, chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuziva ndechekuti ivo havaigona kukupa iwe zvirinani chipo. Iyo Apple smart wachi inokwanisa kuita akawanda mabasa uye mamwe acho otomatiki, sekuona kudonha kana kuverenga moyo wako. Kunyangwe kuitira kuti iwe ugone kuita ese mashandiro Iwe unofanirwa kutanga wagadzira iyo Apple Watch kuti ikuteedzere iwe. Isu tinokudzidzisa iwe kutora matanho ekutanga neawa uye nekumisikidza iyo kwaunoda.
1 Gadzira zvindori zvehutano
2 Sarudza iyo skrini sphere iwe yaunofarira zvakanyanya
3 Gadzira mabasa ehutano ewachi
3.1 Kuonekwa kwekudonha
3.3 Okisijeni muropa
Gadzira zvindori zvehutano
Kune vazhinji, iyo Apple Watch icho chigadzirwa chinotakurika chakanangana nekugwinya. Kiyi yeiyi ndeye matatu emhete, nenzira yatatova neiyo nyowani yegore idzva, imwe neimwe inomiririrwa neruvara rwakasiyana: tsvuku yekufamba (macalorie), girini yekurovedza muviri, uye bhuruu yenguva dzatiri kushanda. Chimwe nechimwe chazvo chichafambira mberi apo iwe uchiita mamwe mabasa. Kana iwe wakagara kwemaawa marefu maaramu anokuyeuchidza kuti umire uye ufambe kweinenge miniti. Paunosvika kumaawa gumi nemaviri, ichapedziswa.
Mhete yekufambisa ichazadziswa kana iwe wasvika pane calorie shoma iyo iwe yawakasarudza kare. Uye iyo yekurovedza mhete ichavhara mukati memaminitsi makumi matatu emitambo chiitiko kana kufamba nekukurumidza. Unogona kushandura chero chazvo. Iringi yekurovedza inogona kudzikiswa kana kukwidziridzwa muzvikamu zvishanu, kusvika pamaminetsi gumi kana anopfuura maminetsi makumi matanhatu. Mhete yebhuruu inogona kushandurwa panguva dzeawa, kusvika padiki kwemaawa matanhatu (kwete anopfuura gumi nemaviri).
Vhura iyo Chiitiko app
Bhura pasi uye uwane bhatani «Chinja zvinangwa». Shandisa ma + kana - mabhatani kugadzirisa lenzi dzako kana kushandisa korona yedigital.
Bata «Gamuchira» kusimbisa shanduko dzako.
Sarudza iyo skrini sphere iwe yaunofarira zvakanyanya
Icho chimwe chezvinhu zvekutanga izvo zvauri kuzogadziridza kune zvaunofarira. Icho chiri chepakati chikamu cheApple Watch. Pane chako chekutarisa chiso, iwe unogona kuwedzera ruzivo parameter inozivikanwa sekunetseka, kusanganisira zvinhu senge mamiriro ekunze, chiitiko chedhata, ruzivo rwekushaya kwemoyo, uye zvimwe zvakawanda. Nzira iri nyore yekuvaka chiso cheApple Watch Icho chiri neApple Watch application pane iPhone.
Unogona kuwana raibhurari yekutarisa kumeso mune yeapp ye "Tarisa Face Garari" tab, uye paunenge uchizvigadzira, unogona kuzviwedzera kune yako yekuunganidza. Paunenge iwe wagadzira akawanda mawadhi ekuona, unogona kuatsvedza kubva kuApple Watch yako kubva kuruboshwe kuenda kurudyi, zvichiita kuti zvive nyore kugadzirisa pane iyo nhunzi yezviitiko zvakasiyana. Zvichienderana nespare iwe unogona kuwedzera zvimwe kana zvishoma ruzivo kwariri.
Gadzira mabasa ehutano ewachi
Iri basa rinobatsira kwazvo. Funga nezvevakwegura asiwo nezvevaya vese vanofamba-famba neguta nebhasikoro kana kuda kuenda kunotamba mitambo. Iri basa rinoshandisa gyroscope uye accelerometer kuti tione kana tichidonha uye, zvakanyanya kukosha, kana tikadonha isu hatigone kusimuka. Nokusingaperi, kudonha kwekuonekwa kwakaremara kune vashandisi vari pasi pemakumi matanhatu nemashanu, asi unogona kuzvigonesa nemaoko:
Apple Tarisa app pane yako iPhone> SOS emergency> Kuonekwa kwekudonha
Apple inonyevera kuti vashandisi vanoshanda zvakanyanya vanogona kumisa basa iri Kunyangwe iwe usati wadonha Semuenzaniso, kana zviitwa zvine hunyanzvi zviitwa izvo zvinogona kufanana nekudonha.
Isu tinokwanisa kugonesa seti yezvinhu zvinobvumidza iyo Apple Watch kubatsira chengeta moyo. Mukati meApple Watch application yeiyo iPhone tinotarisa iyo YeMoyo chikamu. Kubva ipapo tinogona:
Isa uye gonesa electro cardiogram app (ECG) kutora mhasuru kuverenga kubva kuApple Watch chero bedzi iri dzakateedzana 4 zvichikwira.
Gadza mametari ehutano hwemweya uye notisi, iyo chiratidzo chakasimba chehutano hwako hwese
Tambira zviziviso irgular rhythm, yakakwira kana yakaderera kurova kwemoyo
Kana iwe uri kushandisa Apple Watch Series 6, isu tinogona zvakare kutora kuverenga ropa reoksijeni. Tinofanira chete vhura iyo application kubva kuiyo iPhone uye igone iyo. Iri basa rakaunzwa neApple sechinhu chitsva uye chakabatana nechimwe chezviratidzo zve COVID-19.
Nemazano aya, tinovimba kuti zvirinani zvakakosha zvakafukidzwa. Zvino unongofanira kunakirwa nechipo chako uye enderera "kubvunda" nezvimwe zvinhu zvaunoona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Dzidza maitiro ekugadzirisa yako nyowani Apple Watch kune yako yaunofarira
Clearview inotibvumidza kushanda nee-mabhuku sekunge tiri kuzviita panyama
Nyowani kuMac? Iri diki gwara richakubatsira iwe zvakanyanya